Inkampani yeBayer kanye nemitha yeglucose Contour TC. Izinzuzo, izindleko > Ukulawulwa kwesifo sikashukela
IGlucometer Bayer Contour TS (iBayer Contour TS)
* Intengo endaweni yakho ingahluka. Thenga
Imitha ye-Contour TS (Contour TS) inikwa amandla ubuchwepheshe obusha obunikeza imiphumela esheshayo. Uhlelo lwenzelwe ukwenza lula inqubo yokulinganisa ushukela wegazi. Konke ukuzula kwenziwa kusetshenziswa izinkinobho ezimbili. IGlucometer Contour TS (Contur TS) ayidingi ukufaka amakhodi ngesandla. Ukufaka ikhodi kwenzeka ngokuzenzakalelayo lapho umsebenzisi efaka umucu wokuhlola echwebeni.
Idivayisi inosayizi omncane, olungele ukuthwala, ukuyisebenzisa ngaphandle kwasekhaya .. Isikrini esikhulu nembobo ekhanyayo ye-orange yemichilo yenza ukuthi insiza ilungele abantu abanokulimazeka okubukwayo. Umphumela wokulinganisa uvela esikrinini ngemuva kwemizuzwana emi-5, akukho zibalo ezingeziwe ezidingekayo.
Incazelo yemitha Contour TS (Contour TS).
I-glucose yedivaysi yokulinganisa i-Contour TS. Ihlangabezana nezidingo ze-ISO 15197: 2013 ejwayelekile yamazwe omhlaba, ngokusho ukuthi ama-glucometer kufanele ahlinzeke ngokunemba okuphezulu kwezilinganiso kanye nephesenti nje elincane lokuqhathanisa uma kuqhathaniswa nokuhlaziywa kwelebhu. Umthombo ojwayelekile wamaphutha yisidingo sokufaka amakhodi ezandla. I-Contour TS (Contur TS) isebenza kubuchwepheshe "Ngaphandle kokufaka amakhodi". Isiguli asidingi ukufaka ikhodi noma ukufaka i-chip yedwa.
Umthamo wegazi wokulinganisa ungama-0.6 ml kuphela. Umphumela ulungile ngemizuzwana emi-5. Ubuchwepheshe be-capillary busetshenziselwa uthango. Kwanele ukuletha umucu phansi ukuze nawo uqobo uthathe inani elifanele legazi. Umsebenzi wokunquma amasiginali "underfill" esikrinini ukuthi alikho igazi elanele ukukala.
Imitha ye-Contour TS isebenzisa indlela yokulinganisa ye-electrochemical. I-FAD-GDH ye-enzyme ekhethekile, engaphenduli namanye ushukela (ngaphandle kwe-xylose), empeleni ayisabeli ku-ascorbic acid, paracetamol kanye nezinye izidakamizwa ezimbalwa, ibandakanyeka kule nqubo.
Izinkomba ezitholwe ngesikhathi sokulinganiswa ngesisombululo sokulawula zimakwe ngokuzenzakalelayo futhi azisetshenziswa ukubala imiphumela emaphakathi.
I-Contour TS glucometer isebenza ezimweni zezulu ezahlukahlukene:
emazingeni okushisa aphakathi kuka-5 kuya ku-+40 ° C,
umswakama ohlobene 10-93%
kufika ku-3048 m ngaphezu kwezinga lolwandle.
Imemori yedivayisi yenzelwe izilinganiso ezingama-250, ezingatholakala ezinyangeni ezi-4 zokusebenza *. Izinhlobo ezahlukahlukene zegazi zisetshenziselwa ukuhlaziya:
Igazi lithathwa emunweni nakwezinye izindawo ezingeziwe: isundu noma ihlombe. Ububanzi bezilinganiso zeglucose ngu-0.6-33.3 mmol / L. Uma umphumela ungahambisani namavelu akhonjisiwe, khona-ke uphawu olukhethekile lukhanya esibukweni se-glucometer. Ukulinganisa kwenzeka nge-plasma, i.e. imitha yeglucose yegazi inquma okuqukethwe kwe-glucose ku-plasma yegazi. Umphumela ulungiswa ngokuzenzakalelayo nge-hematocrit ye-0-70%, ekuvumela ukuthi uthole inkomba enembile yeglucose egazini.
Ebhukwini le-Contour TS, ubukhulu buchazwa ngokulandelayo:
Usayizi wesikrini - 38x28 mm.
Idivayisi ifakwe ichweba lokuxhuma kwikhompyutha nokudlulisa imininingwane. Umenzi unikeza iwaranti engenamkhawulo kudivayisi yakhe.
Kwiphakethe elilodwa akukho kuphela i-Contour TC glucometer, izinsiza zedivayisi zihambisana nezinye izesekeli:
ukubhoboza umunwe i-Microlight 2,
oyinyumba ama-Microlight - ama-5 ama-PC.,
umhlahlandlela wesithenjwa osheshayo
Imichilo ye-Test Contour TS (Contour TS) ayifakwanga nemitha futhi kufanele ithengwe ngokwahlukile.
Idivaysi ingasetjenziselwa ukuhlaziya okubonakalayo kwe-glucose esikhungweni sezokwelapha. Ngokukhomba ngomunwe, kufanele kusetshenziswe izihluzi ezilahlekayo.
Imitha inikwa amandla ibhethri elilodwa le-3-volt lithium DL2032 noma CR2032. Ukukhokhiswa kwayo kwanele ngezilinganiso eziyi-1000, ezihambelana nonyaka wokusebenza. Ukushintshwa kwebhethri kwenziwa ngokuzimela. Ngemuva kokufaka ibhethri esikhundleni, kuyadingeka ukusetha isikhathi. Amanye amapharamitha nemiphumela yokulinganisa igcinwa.
Imithetho yokusebenzisa imitha ye-Contour TS
Lungiselela ukubhoboza ngokubeka i-lancet kuyo. Lungisa ukujula kwesikhonkwane.
Namathisela ukubhoboza umunwe wakho bese ucindezela inkinobho.
Bamba ingcindezi encane emunweni kusuka kubhulashi kuya ku-phalanx eyeqisayo. Musa ukusongela umunwe wakho!
Masinyane ngemuva kokuthola ithonsi legazi, ulethe insimbi ye-Contour TS ngentambo yokufaka efakiwe. Kufanele ubambe insimbi ngomucu phansi noma ubheke kuwe. Musa ukuthinta umucu wokuhlolwa kwesikhumba futhi ungashizi igazi ngenhla komucu wokuhlola.
Bamba umucu wokuvivinya ekhaleni legazi kuze kuzwakale umsindo we-beep.
Lapho ukubala sekuphela, umphumela wokulinganisa uvela esikrinini semitha
Kumemori yedivayisi, umphumela ugcinwa nge-othomathikhi. Ukucisha ucingo, susa ngokucophelela umucu wokuhlola.
I-Bayer Concern nemikhiqizo yayo
Eqinisweni, imboni yokukhiqiza yenkampani ibanzi kakhulu. Ngaphezu kwezempilo, ukuthuthukiswa kweBayer kuyatholakala kwezolimo nasekwenzeni izinto zepolymeric.
Ekuqaleni kukaJuni 2015, iBayer Group yanquma ukudlulisela ekubambeni IPanasonic Healthcare Lokhu kungukuqondisa kwebhizinisi lakho elihambisana nokuqapha ushukela wegazi. Manje umugqa Ukunakekelwa kwesifo sikashukela okubandakanya imikhiqizo eyaziwayo yama-glucometer, imichilo yokuhlola, amalambu neminye imikhiqizo ehlobene, "umnikazi" omusha.
Ukujikeleza kwezimoto nokunyuka - incazelo yokuqhathanisa
Uhlobo lwe-glucometer okufanele uyisebenzise - umuntu ngamunye onesifo sikashukela uvame ukuzinqumela. Othile kufanele aqhubeke kuphela kusukela ngentengo yedivaysi, othile unesifiso sokuxhuma kwikhompyutha noma kumklamo "ongewona wezokwelapha".
Izici zabo eziphambili zokuqhathanisa kalula zinikezwe ethebula elingezansi.
Idivayisi Isikhathi sokulinganisa, imizuzwana Inani lemiphumela kwimemori yedivayisi Ukushisa okusebenzayo Izindleko "Gqamisa"
Ukungena kwe-Ascension 30 10 18-38 ° C ngaphezulu kwe-zero okungaphezulu kuka-1000 p. Kubekwe njengokweneleyo ekulinganiselweni kwemisebenzi, ukwenziwa kwamanani kanye nentengo
Ascension Elite 30 20 10-40 ° C ngaphezulu kuka-zero kusuka ku-2000 p. nangaphezulu Azikho izinkinobho, vula / vala ngokuzenzakalelayo
Ukujikeleza kwezimoto 8 250 I-05-45 ° C ngaphezulu kwe-zero okungaphezulu kuka-1000 p. Ukusungula: akukho okubhaliwe. Kungenzeka ukuxhuma kwikhompyutha.
Yini le mishini emithathu efana ngayo?
Wonke umuntu unesisindo esincane. Isibonelo, i-Elite inesisindo esingama-gramu angamashumi amahlanu kuphela, i-Entrast - 64 g, phakathi kwabo - Contour TS (56,7 g).
Noma imiphi imitha inefonti enkulu. Ipharamitha enhle kakhulu yeziguli eziningi ezinesifo sikashukela.
isikhathi sokulinda somphumela wokuhlaziywa sincishisiwe,
Izimo zokusebenza ziyathuthuka
inani lememori yangaphakathi liyakhuphuka
ukuthinta ngakunye kuvela - ngokwesibonelo, ukungabikho kwezinkinobho.
Futhi izinhlamvu u-TS (TS) zisho ukuthini egameni lenye yama-glucometer?
Lesi isifinyezo sebinzana eliphelele, okulula, ukusula ngokuphelele. Labo abasebenzise ucingo bayavuma.
Umuthi wamakhambi nesifo sikashukela. Kusetshenziswe izincomo ezibalulekile namakhambi
Amagama ambalwa mayelana nokushiyeka kweBayer glucometer
Ascension Elite kuyabiza kakhulu ukwedlula "abafowabo". Kungashiwo okufanayo mayelana nemichilo yokuvivinya kukho.
Ukujikeleza kwezimoto ebekelwe ushukela we-plasma, hhayi igazi le-capillary. Njengoba ushukela we-plasma uphakeme ngenani, imiphumela etholwe yi-TC Circuit kumele iphinde ibhalwe. Kepha ungamane urekhode amazinga ajwayelekile kashukela egazini le-venous bese ulisebenzisa ukuqhathanisa.
Ukungena kwe-Ascension - Le glucometer "inegazi" kakhulu. Udinga i-3 μl (microliter, i.e. mm 3) yegazi. I-Elite idinga ama-microliters amabili, kanti isekethe ye-TC idinga kuphela u-0.6 μl.
Igama lomkhiqizo weBayer laziwa kahle ngabaningi bethu. Imithi evela kulo mkhiqizi ingabonakala cishe kunoma iyiphi ikhabethe yemithi yasekhaya.
Ekuqaleni kukaJuni 2015, iBayer Group yanquma ukudlulisela ekubambeni IPanasonic Healthcare Lokhu kuyinkomba yebhizinisi lakho elihambisana nokuqapha ushukela wegazi. Manje umugqa Ukunakekelwa kwesifo sikashukela okubandakanya imikhiqizo eyaziwayo yama-glucometer, imichilo yokuhlola, amalambu neminye imikhiqizo ehlobene, "umnikazi" omusha.
Ukuqashelwa okunjalo kuzoqapheleka kangakanani kumsebenzisi wokugcina, akukho lwazi. Kodwa-ke, kusobala ukuthi abanesifo sikashukela abaningi basebenzisa amamitha kashukela egazi owaziwayo weBayer. Isibonelo, lezo ezikhiqizwa ngaphansi komkhiqizo i-Ascensia neKontur.
Amamitha kashukela egazi odumile, akhiqizwa yiBayer iminyaka eminingi:
Ngasinye sinesisindo esincane. Isibonelo, i-Elite inesisindo esingama-gramu angamashumi amahlanu kuphela, i-Entrast inesisindo esingu-amagremu angama-64, phakathi kwabo kukhona i-TC Contour (amagrama angama-56,7).
Uma ubheka yonke izinhlobo ezintathu zama-glucometer, ungathola ukuthi yikuphi ukuthuthuka kwamadivayisi okuya khona:
Ngingakwazi ukwakha umzimba ngesifo sikashukela? Imithwalo yamandla imthinta kanjani umuntu onesifo sikashukela?
I-Sour cream: ilusizo noma iyingozi kushukela? Funda kabanzi kule ndatshana.
Into esemqoka kunoma yiliphi imitha ukuthi wonke umuntu onesifo sikashukela unakho. Futhi uma kungenakwenzeka ukwelapha ushukela ngokuphelele, khona-ke kungenzeka ukuvimba inqwaba yokubonakaliswa kwayo okungajabulisi ukuba kungaveli.
Izici zobuchwepheshe zivumela ukukalwa hhayi egazini elithathwe esikhwameni somunwe kuphela, kodwa kusuka kwezinye izindawo - ngokwesibonelo, intende. Kepha le ndlela inemikhawulo:
Amasampula egazi athathwa amahora amabili ngemuva kokudla, ukuthatha umuthi, noma ukulayisha.
Izindawo ezihlukile akufanele zisetshenziswe uma kunezinsolo zokuthi izinga likashukela liphansi.
Igazi lithathwa kuphela emunweni, uma kufanele ushayele izimoto, ngesikhathi sokugula, ngemuva koxinzelelo lwezinzwa noma esimweni sempilo esingesihle.
Uma ithuluzi licishiwe, cindezela ubambe inkinobho M ukubuka imiphumela yokuhlolwa yangaphambilini. Futhi esikrinini engxenyeni ephakathi kukhonjiswa ushukela wegazi ojwayelekile ezinsukwini eziyi-14 ezedlule. Usebenzisa inkinobho yonxantathu, ungadlulela kuyo yonke imiphumela egcinwe kwimemori. Lapho uphawu lwe- "END" luvela esikrinini, kusho ukuthi zonke izinkomba ezigciniwe seziye zabukwa.
Kusetshenziswa inkinobho enophawu u "M", amasiginali omsindo, usuku nesikhathi kuhleliwe. Ifomethi yesikhathi ingaba amahora ayi-12 noma angama-24.
Imiyalo ihlinzeka ngokuqokwa kwamakhodi wephutha avela lapho izinga le-glucose liphezulu kakhulu noma liphansi, ibhethri seliphelile, nokusebenza okungafanele.
Imitha ye-Contour TS ushukela kulula ukuyisebenzisa. Izici ezilandelayo zihlanganisa:
usayizi omncane wedivayisi
asikho isidingo sokufaka amakhowudi,
ukunemba okukhulu kwensiza,
i-enzyme yesimanje ye-glucose kuphela
ukulungiswa kwezinkomba nge-hematocrit ephansi,
isikrini esikhulu nembobo ebonakalayo ekhanyayo yemichilo yokuhlola,
umthamo wegazi ophansi nejubane elikhulu lokulinganisa,
izimo eziningi zokusebenza,
amathuba okusebenzisa kubantu abadala nasezinganeni (ngaphandle kwabasanda kuzalwa),
inkumbulo yokulinganisa okungu-250,
ukuxhuma kwikhompyutha ukusindisa idatha,
amathuba okuhlolwa kwegazi kusuka kwezinye izindawo,
asikho isidingo sokwenza ukubalwa okwengeziwe,
Ukuhlaziywa kwezinhlobo ezahlukahlukene zegazi,
Insizakalo yesiqinisekiso esivela kumenzi kanye nekhono lokubuyisela imitha eyiphutha.
Isifinyezo esisegameni le-glucose imitha TS simelela i-Total Simplicity, okusho ukuthi "Kulula ngokuphelele" ekuhumusheni.
Imitha ye-Contour TS (Contour TS) isebenza kuphela ngemichilo yegama elifanayo. Ukusetshenziswa kweminye imichilo yokuhlola akunakwenzeka. Imichilo ayinikezwa ngemitha futhi idinga ukuthi ithengwe ngokwahlukana. Impilo yeshelufu yemichilo yokuhlola ayixhomekeki ngosuku iphakethe elivulwe ngalo.
Idivayisi inikeza isinali eyodwa yomsindo lapho i-strip yokuhlola ifakiwe futhi igcwele igazi. Ukuphindwe kabili kusho iphutha.
Umjikelezo we-TS (Contour TS) nemichilo yokuhlola kufanele ivikeleke ekushiseni ngokweqile, odakeni, othulini nasomswakama. Kunconywa ukugcina kuphela ebhodleleni elikhethekile. Uma kunesidingo, sebenzisa indwangu encibilikisiwe, engenawo ucocekile ukuhlanza umzimba wemitha. Isixazululo sokuhlanza silungiswa kusuka engxenyeni eyi-1 yanoma yisiphi isihlanzisi nengxenye 9 zamanzi. Vikela ukuthola isixazululo ethekwini nangaphansi kwezinkinobho. Ngemuva kokuhlanza, sula ngendwangu eyomile.
Uma kwenzeka ukungasebenzi kahle kwezobuchwepheshe, ukuwohloka kwensiza, kufanele uthinte inombolo hotline ebhokisini, kanye nencwajana yemiyalezo, kumamitha.
* ngesilinganiso esimaphakathi sezikhathi ezi-2 ngosuku
I-RU No. FSZ 2007/00570 yango-05/10/197, Nombolo FSZ 2008/01121 lango-03/20/17
UKUXHUMANA KUYAFANELE. NGaphambi kwesicelo KUDINGA UKUQHAWULA ISITOLO SAKHO SOKUFUNDA I-USER Manual.
I Nikeza ukunemba:
Uhlelo lusebenzisa i-enzyme yesimanje emgqeni wokuhlola, ongenakho ukuxhumana nezidakamizwa, okuqinisekisa ukukalwa okulingene lapho uthatha, isibonelo, paracetamol, ascorbic acid / Vitamin C
I-glucometer yenza ukulungiswa okuzenzakalelayo kwemiphumela yokulinganisa nge-hematocrit kusuka ku-0 iye ku-70% - lokhu kukuvumela ukuthi uthole ukunemba okuphezulu kwesilinganiso ngobubanzi obunhlobonhlobo be-hematocrit, engahle ihliswe noma inyuswe ngenxa yezifo ezahlukahlukene
Idivayisi inikeza ukwethenjwa ezimweni zezulu ezibanzi:
ibanga lokushisa okusebenzayo 5 ° C - 45 °
umswakama 10 - 93% rel. umswakama
ukuphakama ngaphezu kwezinga lolwandle - kufinyelela kuma-3048 m.
Akukho ukufaka amakhodi - akukho khodi yokufaka edingekayo
II Ukunikeza lula:
Usayizi omncane wethonsi legazi - ngu-0.6 μl kuphela, umsebenzi wokutholwa "wokugcwalisa"
Uhlelo luthatha izilinganiso ngemizuzwana eyi-5, olunikeza imiphumela esheshayo
Imemori - Gcina Imiphumela yokugcina engama-250
Imemori yemiphumela engu-250 - ukugcinwa kwedatha kokuhlaziywa kwemiphumela yezinyanga ezi-4 *
Ubuchwepheshe “bokuhoxiswa” kwegazi ngebhande lokuvivinya
Amathuba wokuthatha igazi kwezinye izindawo (isundu, ihlombe)
Amandla wokusebenzisa zonke izinhlobo zegazi (arterial, venous, capillary)
Usuku lokuphelelwa isikhathi kwemichilo yokuhlola (ekhonjiswe kumaphakeji) ayixhomekeki esikhathini sokuvula ibhodlela ngemichilo yokuhlola,
Imbobo ebonakalayo ebonakala kakhulu ye-orange yemichilo yokuhlola
Isikrini esikhulu (38 mm x 28 mm)
Ukumakwa okuzenzakalelayo kwamavelu atholwe ngesikhathi sokulinganiswa esithathwe nesixazululo sokulawula - la amanani awafakwanga ekubalwa kwezinkomba eziphakathi
Imbobo yokudlulisa idatha kwi-PC
Ukulinganisa ibanga 0,6 - 33.3 mmol / l
Isilinganiso sokulinganisa - i-electrochemical
Ukulinganiswa kwe-plasma yegazi
Ibhethri: ibhethri elilodwa le-3-volt lithium, umthamo we-225mAh (DL2032 noma CR2032), lenzelwe ukulinganisa okungu-1000
Ubukhulu - 71 x 60 x 19 mm (ukuphakama x ububanzi x ubukhulu)
Iwaranti yomkhiqizi engenamkhawulo
* Ngesilinganiso esimaphakathi sezikhathi ezi-4 ngosuku
Akulula ukuthi abanesifo sikashukela bakhethe insiza yokulinganisa ushukela egazini, njengoba kunabakhiqizi abaningi namamodeli emakethe manje. Ukunemba kwesilinganiso, inani lentengo elingabizi ledivaysi kanye nemichilo yokuhlola, isiqinisekiso eside senkonzo sibalulekile. I-Bayer Contour TS glucometer ingenye yalezi: zesimanje, ezilula futhi ezinokwethenjelwa, futhi kade wanqoba uthando lwamakhasimende.
Imichilo yokuhlola ye-Contour TS ingatholakala cishe kunoma iyiphi ikhemisi, etholakala njalo kwinethiwekhi yesifo sikashukela futhi ngokuvamile ngentengo ethokozisayo.
Uma uthenga, ngaphezu kudivayisi ngokwayo, ikhithi ifaka phakathi isikhashana, izingono ezi-10, isembozo nencwadi yemiphumela yokuqopha. Inzuzo enkulu ukuthi idivaysi ayidingi ukufaka amakhodi - asikho isidingo sokufaka ama-chip bese ufaka amakhodi ngesandla. Umyalo unamathiselwe kumitha ezokufundisa kalula ukusebenzisa ithuluzi.
Idivaysi isebenza kahle kakhulu. Ibhethri elilodwa le-lithium lanele ngezilinganiso eziyi-1000 (cishe unyaka ongu-1 wokusebenzisa). Ukuvula ngokuzenzakalela (lapho kungeniswa umucu wokuvivinya) bese uyicisha (ngemuva kwemizuzwana engama-60-90 ngemuva kokuphela komsebenzi) nakho konga kakhulu amandla ebhethri.
Impilo yenkonzo yewaranti yemitha yiminyaka emi-5.
Imichilo yokuhlola ayifakiwe kwiphakheji eyisisekelo, kepha ngokubiza i-hotline yesifo sikashukela, ungahlala uthole mayelana nokukhushulwa namanani akhethekile wemigqa ehlukahlukene yokuhlola yale modeli ye-expression ehlaziyayo, futhi uthole imininingwane eminingi ngokusebenza insimbi. Isifo sikashukela sihlala siyinsizakalo yekhwalithi, futhi imikhiqizo efakazelwe kuphela.
Thayipha Imitha kashukela wegazi
Indlela yokulinganisa electrochemical
Isikhathi sokulinganisa 7 sec
Isampula yevolumu 0.6 μl
Ububanzi Bokukala 0.6-33.3 mmol / L
Inkumbulo Izilinganiso ezingama-250
Ukulinganisa ku-plasma wegazi
Ukufaka amakhodi ngaphandle kokufaka amakhodi
Ukuxhumeka kwikhompyutha yebo
Ubukhulu 71 * 60 * 25 mm
Isisindo 57 g
Into yebhethri CR2032
Umkhiqizi I-Bayer Diabetes Care, e-USA